Otu esi amanye ịkwụsị ngwa na MacBook Pro 2016, ma ọ bụrụ na Ogwe Mmetụta anaghị aza | Esi m mac
Otu esi amanye ịhapụ ngwa na MacBook Pro 2016, ọ bụrụ na Ogwe Aka adịghị aza
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Nkuzi, ọtụtụ
MacO bụ otu n'ime sistemụ arụmọrụ kwụsiri ike nke anyị nwere ike ịchọta taa. Nke a pụtara na etu mmiri si dị mfe na etu esi eme ya dị ọcha. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ndị ọzọ, dịka oge nke ngwa anaghị azaghachi ma anyị ga-amanye ya ịpụ. Otu n'ime echiche izizi m nwetara mgbe m bidoro Mac, bụ etu mmemme a si mechie ngwa ngwa, ka m wee mepee ya ozigbo. Mana ikekwe usoro a nwere ike gbagwojuru anya na MacBook Pro 2016 ọhụrụ, ebe igodo mgbapụ, dị mkpa iji rụọ ọrụ usoro Cmd + Alt + mgbapụ, ma si otú ahụ na-akpọ mbupụ ike nke ngwa, enwere ike ọ gaghị adị. Gini ka anyi ga - eme?
Izizi, ịnwere ike imetụ Touch Bar aka, jiri iwu na-enweghị ọnụ. Mepee ya ma tinye usoro ndị a:
pkill «Touch Bar gị n'ụlọnga»
Ogwe ahụ kwesịrị ịmalitegharị na bọtịnụ anyị na-eche ogologo oge ga-adị ọzọ.
Ma mgbe ụfọdụ nsogbu ahụ na-alọghachi. N'ozuzu nke a na-eme mgbe ngwa ahụ nwere ahụhụ, nke na-egbochi ya ịga n'ihu dịka o kwesiri. N'okwu ahụ, usoro gara aga nwere ike ọ gaghị ezu ma anyị ga-aga na ngwa ọdịnala iji mee ka ọpụpụ ngwa ahụ. N'okwu ahụ, anyị ga-eso usoro ndị a:
Must ga-aga aka ekpe aka ekpe, ma pịa akara Apple .
Họrọ nhọrọ "Force ipu" n'ime nhọrọ nhọrọ.
Chọọ ma pịa ngwa ahụ na - akpata nsogbu gị ịga n'ihu ma chọọ imechi, n'ihi na ịnweghị ike ịga n'ihu na ọrụ ahụ.
Mgbe ah pịa na "Force Kwụsị" button.
Ngwa a ga-emechi ozugbo. I nwekwara ike izo aka na uzo abuo abuo nke oma. Chetara gị na ụzọ mkpirisi a bụ: Cmd + Alt + mgbapụ.
Emecha ebe anyị malitere, ọdịnaya nke isiokwu a ekwesịghị itinye n'ọrụ na ntọala ugboro ugboro, ma ọ bụrụ na nke a emee ugboro ugboro, ikekwe anyị kwesịrị ịhụ ndakọrịta ma ọ bụ ntinye nke ngwa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Otu esi amanye ịhapụ ngwa na MacBook Pro 2016, ọ bụrụ na Ogwe Aka adịghị aza
Apple Watch bụ smartwatch kachasị ere n'ụwa, karịa Fitbit
Apple weputara beta nke ise nke tvOS 10.2.1